သင့်အတွက်ရှင်းလင်းသော Barebone ကွန်ပျူတာပုံပြင် ... | Martech Zone
သင့်အတွက် Bare Barebones Computer Story...
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 9, 2007 ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 9, 2007 Douglas Karr
ငါအိမ်မှာဝယ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကွန်ပျူတာ (၄) လုံးငါတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်စနစ်တစ်ခုပေါ်တွင်ငွေစုဆောင်းလိုပါကကွန်ပျူတာများအကြောင်းအနည်းငယ်လေ့လာပြီးသင်၏ခွန်အားကိုပိုမိုရယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်အဓိကအွန်လိုင်းစတိုးတွင်မဆိုရှင်းလင်းသောလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။ ငါ့သားမှထွက်ခွာအတူ IUPUI (ဒီည)၊ ငါသူ့ကိုကြီးစွာသောစနစ်တစ်ခုနဲ့အံ့ to ချင်ခဲ့တယ်!
ငါ့ PayPal အကောင့်ထဲမှာပိုက်ဆံအနည်းငယ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာ PayPal ကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာစတိုးကိုရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် TigerDirectအီလက်ထရွန်းနစ်၊ ကွန်ပျူတာနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကြီးမားသောအွန်လိုင်းဂိုဒေါင်တစ်ခု။ ငါ "လို့ခေါ်တဲ့ barebones စနစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်အဆိုပါ gladiator“ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေမလိုအပ်တဲ့စတိုင်ကျတဲ့အိတ် (drives တွေနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အထူး brackets များကိုအသုံးချပြီးလျှောပြီးတပ်ဆင်ထားသည်။ )
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏သားသည် UPS မှနောက်ဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသားရဲကိုအတူတကွစတင်ခဲ့သည်။ ငါ barebones system ကိုငါနောက်ဆုံးဝယ်ကတည်းကအမှုအရာပြောင်းလဲသွားတယ်! ကျွန်ုပ်စတင်မလုပ်ခင်ကျွန်ုပ်ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ရန်လင့်ခ်တစ်ခုကိုနှိပ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားသော TigerDirect အီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်ရခဲ့သည်။ ပြဿနာ? ငါ့ငွေကိုငါ့အကောင့်ထဲကယူပြီးပြီ!
ငါဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးဖုန်းမခေါ်ခင်အထိ ၀ ယ်ထားတာကသေချာနေပြီ။ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ငွေများကိုယူပြီးသူတို့ပစ္စည်းများကိုမပို့မီအတည်ပြုလိုကြသည်။ ကောင်းပြီဟမ်? ငါအီးမေးလ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်မယ့်ခဲ့ဖော်ပြသင့်ကြောင်းသူတို့ကိုငါတိုင်ကြား။ အိုကောင်းပြီ။
သငျသညျ barebones system ကိုဝယ်ခြင်းငှါအသုံးပြုသောအခါ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာ system ထဲမှာအနည်းငယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပစ်နိုင်သည် - များသောအားဖြင့် hard drive နဲ့ DVD-RW, သင်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီရှင်းလင်းသောကိရိယာမရှိသော်လည်း hard drive နှင့်ပါလာသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာသို့သွားပါကသာမာန်လူတစ်ယောက် (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) လွဲချော်သွားနိုင်သည့်အလွန်ထူးဆန်းသောအရာနှစ်ခုကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
မရှိပါ ပန်ကာ ပရိုဆက်ဆာအတွက်! ၎င်းသည်မည်သည့်ခေတ်မီပရိုဆက်ဆာအတွက်မဆိုလုံးဝလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို barebones kit မှချန်ထားသင့်သည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
Hard Drive ကိုမှတ်မိပါသလား။ သူတို့က 200Gb Maxtor EIDE hard drive ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဟမ်ကောင်းလား Serial ATA (SATA) အတွက်စနစ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် မှလွဲ၍ …ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ့သား၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူသူသည် hard drive ကိုတပ်ဆင်ရန်နေရာမရှိ။
ဒီတော့ငါ့သားကကွန်ပျူတာမပါပဲဒီနေ့ကောလိပ်ကိုတက်သွားတယ်။ သူကမီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်မှာအပိုင်းအစများစွာနဲ့ထိုင်ပြီးဘယ်သူမှအသုံးမ ၀ င်ပါဘူး။ Arrrgh ။ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများပင်ယူတာပဲ။ Motherboard ပါတဲ့စာအုပ်ရတဲ့အခါမင်းမှတ်မိသေးတယ်၊ အခုငါမှာအသေးစိတ်မရှိတဲ့ပိုစတာရှိတယ်။ ဒါကစိတ်ပျက်စရာပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Hard Drive မှာဘာမှပြန်မရပါဘူး။ ဟုတ်ပြီ တခြားနေရာကိုသုံးလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ site ကိုငါပေးမယ်။
ငါအဘို့အရှိသည်တစ်ခုတည်းသောလက်မတက် TigerDirect အစိတ်အပိုင်းများ၏လျင်မြန်ပေးပို့အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငွေပေးချေမှုမှသည်အိမ်ရှေ့တံခါးအထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၂ ရက်သာကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ မညစ်ပတ်ဘူး။ ဒီနေရာမှာလာမယ့်စုံတွဲအစိတ်အပိုင်းများကိုစနေနေ့အားဖြင့်ဒီမှာလုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်! ဘီလ် တနင်္ဂနွေနေ့ပြန်ပါမည်။
Apple eMac နှင့် Microsoft XBox?
သြဂုတ်လ9ရက် 2007 ခုနှစ် 10:11 နာရီ
အကယ်၍ သင်သည် ဟာ့ဒ်ဒရိုက်အတွက် အိမ်တစ်လုံးကို ရှာလိုပါက Doug သည် ဇနီးသည်၏ မီဒီယာစက်တွင် ကျရှုံးနေသော 40 gig ကို အကောင်းဆုံး အစားထိုးပေးနိုင်သောကြောင့် Doug ကို သင်မည်မျှလိုချင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်အား ပြောပြပါ။
သြဂုတ် 10, 2007 မှာ 9: 40 AM
Mac ကို ဘယ်လိုသုံးသင့်တယ်ဆိုတာ မင်းရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ အထွေထွေသိတဲ့လူ။ ကောင်းမွန်သော MacBook သည် သယ်ဆောင်ရန် ကောင်းမွန်သော စက်တစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည် ။
နေသာသော အင်္ဂလန်မှ ဆုမွန်ကောင်းများ (တစ်ကြိမ်သာ!)
သြဂုတ် 10, 2007 မှာ 9: 42 AM
နောက်တစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ သင်ဟာ Mac သမားတစ်ယောက်ပါ။ ထိပ်တန်းအရာများ